हायात होटेलमा राज्यको ३०४ रोपनी जग्गा : तर सरकारको सेयर ३९.७७ बाट झारेर जम्मा ९.०१ प्रतिशतमा सीमित, खुलासा भएको एक वर्षसम्म सरकार मौन -
हायात होटेलबारे संसदीय समितिले दिएका १४ निर्देशनमध्ये अहिलेसम्म एउटा निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएको तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले बताए । ‘संसदीय समितिको निर्देशन आएको हो, तर तारागाउँ विकास समितिको अघिल्लो कार्यसमितिले यस विषयमा चासो राखेन,’ उनले भने, ‘नयाँ समितिको तर्फबाट मैले सञ्चालक समितिमा उपस्थित भएर ६ बुँदे फरक मत राखेको छु ।’ सरकारले गत ३ मंसिरमा न्यौपानेलाई तारागाउँको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई भन्छन्–सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको छ
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हायात होटेलको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा अहिले सरकारले के गर्दै छ ?
सरकार त्यसमा गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको छ ।
प्रस्ट बताइदिनुस् न, किनकि यो भ्रष्टाचारको खुलासा भएको एक वर्ष भइसकेको छ ?
गम्भीरताका साथ काम भइरहेको छ ।
हायात होटेलमा ३०४ रोपनी जग्गा लगानी गरेको सरकारको नाममा रहेको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट झारेर ९.०१ प्रतिशतमा पु¥याइएको छ । संसदीय समितिले त्यसमा पनि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भनेको थियो । त्यसमा के हुँदै छ ?
सरकारको सेयर बढाउनुपर्छ ।
तपाईं गम्भीरताका साथ काम भइरहेको छ भनिरहनुभएको छ, तर तारागाउँ विकास समितिले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार काम हुन नसकेको बताएको छ । गम्भीरताका साथ काम भएको भए किन कारबाही भएको छैन ?
नेपाल सरकारको सेयर त्यसरी घटाउन मिल्दैन । सेयर बढाउनुपर्छ । त्यसको पहल तारागाउँ विकास समितिले गर्छ ।
संसदीय समितिले १५४ रोपनी जग्गाको लिज खारेज गर्न र सरकारको सेयर घटाउने काममा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न भनेको थियो । त्यसमा कति काम गर्नुभयो ?
संसदीय समितिको प्रतिवेदन र हाम्रो आफ्नै निष्कर्षका आधारमा पनि जे गडबड भएको छ, त्यसमा हामी सचेत छौँ । गडबड गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन्छ ।
संसदीय समितिले १४ वटा निर्देशन दिएको थियो, कतिवटा कार्यान्वयन भए ?
मैले प्रस्ट भनेँ नि, हामी गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौँ, परिणाम आएपछि म विस्तृतमा सबै कुरा भन्छु ।
परिणाम आउन कति समय लाग्छ ?
काम गर्दै छौँ ।